Löfven oo isku shaandheeyn ku sameeyay dawladdiisa - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Wasiirka suuqa shaqada Ylva Johansson (S) iyo madaxa dawladda Sweden Stefan Löfven. Sawirle: ТТ
Löfven oo isku shaandheeyn ku sameeyay dawladdiisa
La daabacay onsdag 24 februari 2016 kl 11.22
Madaxa dawladda Sweden Stefan Löfven oo isku shaandheeyn ku sameeyay dawladdiisa ayaa u magacaabay Ylva Johansson, ahna wasiirka suuqa shaqada inay sidoo kale masuuliyad ka qaaddo isku duwidda sidii ey ajaaniibta dalka ku cusubi waddanka ula qabsan lahaayeen.
Tallaabadaa ayaa ka dhigan in Ylva Johansson ay faraha la geli karto oo fikrro u soo jeedin karto wasaarado ey masuuliyaddeeda leeyihiin wasiirro kale oo ey ka mid yihiin wasaaradda tacliinta iyo midda hooyga.
Ylva Johansson oo wareeysi siisay laanta idaacadda ee P1 morgon ayaa sheegtay in howlaha loo xilsaaray aaney ahayn inay xillalka ka xayuubiso wasiirrada kale, hase yeeshee uu wasiir walba masuul ka yahay xilka wasaaraddiisa:
- Cidna ka qaadi maayo masuuliyaddooda, hase yeeshee waxay howsheeydu tahay sidii aan isku habeeyn ugu sameeyn lahaa howlaha, isla-markaana fikirro ugu soo ban-dhigi lahaa, sidoo kale waxaa naga dhaxeeya wada-shaqeeyn wannaag-san, hase yeeshee fikirka ah inuu madmadow ku kala dhex jiro wasiirrada, maahan mid aan ku raaci karo, sida ay sheegtay Ylva Johansson.
Si bal marka loo fahmo maxay tahay masuuliyadda laguu xil-saaray? Ylva Johansson iyo mar kale:
– Masuuliyadda la i saaray waxay tahay dhanka siyaasadda iyo in wasaaradayda laga abuuro laan isku duwid ku sameeysa howlaha khuseeya wasaarado kale aannu meel ugu wada jiheeyn lahayn, sidii ey qeeybaha dhammaantood u dhameeys-tirmi lahaayeen oo aaney u kala jajab-sanaan, sida ay sheegtay.
Dawladda Sweden ayaan maanta lahayn wasaarad u gaar ah oo ay masuuliyad ka saaran tahay oo keliya howlaha is-dhex-galka, halka uu madaxa dawladda Sweden Stefan Löfven uu maanta u kor-dhiyay Ylva Johansson xilalka saaran iyo in masuuliyad ay ka qaado sidii loo mideeyn lahaa dhammaan howlaha la xiriira in sida ugu habboon ey ajaaniibta dalka ku cusubi ula qabsan lahaayeen dalka.
– Waxaa na hor-taagan howlo culus, maadaama ay bulshada dalka soo gashay aad u badan tahay iyo sidii aannu uga soo dhalaali lahayn. In la adkeyo dhismaha Sweden uuna noqdo waddan aan kala qoqobneyn. Waana masuuliyad i saaran sidii aan howlahaa u mideeyn lahayn, sida ay sheegtay Ylva Johansson, wasiirka suuqa shaqada, isla-markaana loo xil-saaray sidii ay isku duwid ugu sameeyn lahayd dhammaan howlaha la xiriira is-dhex-galka.